एक वर्षभित्रमा फोजि सेवा सञ्चालनकाे याेजना छः जिल्ला शाखा प्रमुख कमल प्रसाद के.सी. – रोल्पा समाचार
२०७६ माघ १४, मंगलवार १४:२८ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ माघ १४, मंगलवार १४:२८ गते
विगतको तुलनामा सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रमा रोल्पा जिल्लाबासीहरु पहुँचमा पुग्दै छन् । भने सञ्चारको पहुँचमा पु¥याउन नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयले थप योजना सहित कार्यन्वयनको चरणमा छ । कार्यालयबाट जिल्लाका विभिन्न ठाउँको टावरहरुमा फोजि सेवा समेत विस्तार भएको छ, जसले उपभोक्ताहरुले मोबाइलमा शुलभ दरमा इन्टरनेटको सेवा उपभोग गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चारको पहुँचको अवस्था, फोजि, उपभोक्ताहरुले ध्यान दिनुपर्ने सहितका विषयवस्तुमा नेपाल टेलिकम दुर सञ्चार कार्यालय रोल्पा शाखाको कार्यालय प्रमुख कमल प्रसाद के.सी.सँग रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ ।
२. यस जिल्लामा फोन टावरहरुको अवस्था बताइदिनुहोस्, न ?
सञ्चार सुगमको दृष्टिकोणले साविकको राप्ती अञ्चलको दाङ जिल्ला पहिलो जिल्ला हो । भने दोस्रो जिल्ला यस जिल्ला नै हो । त्यसैले अन्य जिल्लाको तुलनमा यस जिल्ला पनि सञ्चर क्षेत्रमा पनि तीव्र रुपमा विकास हुँदै । हालसम्म यस जिल्लामा २४ ओटा टावरहरु सञ्चालनमा छन् । भने ६ ओटा टावर यस जिल्लाको विभिन्न स्थानमा निर्माधिन अवस्थामा छन् । सबै टावरहरुमा फोजिको प्रस्ताव भएको छ, जसमा ७ ओटा टावरमा फोजि सेवा सञ्चाल भएको छ । भने ९ ओटा टावरमा फागुन महिनासम्म सञ्चालनको तयारी छ । बाँकी टावरमा एक वर्षभित्र फोजि सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
३. कुन–कुन ठाउँको टावरमा फोजि सेवा सञ्चालन भएको छ ?
यस जिल्लाका विभिन्न ठाउँका टावरहरुमध्ये होलेरी, मसिना, स्वर्गद्वरी, खुंग्री, सुलिचौर, साद्दो बाटो, लिबाङका टावरहरुमा फोजि सेवा सञ्चालनमा छ । लिबाङदेखि थबाङसम्मको सडक खण्ड र लिबाङदेखि जुगाँरसम्मको सडक खण्डमा फोजि सेवा विस्तारको तयारी भएको छ ।
४. थ्रीजि र फोजिमा के फरक छ ?
योभन्दा अगाडिको सेवा थ्रीजि सेवामा भ्वाइस प्लस दाता भियो । दाताको गति प्रति सेकण्डमा ३ देखि ५ एम्बियसमा थियो । भने अहिले सञ्चालन भएको फोजि सेवा १०० प्रतिशत नै दाता हो । यसमा भ्वाइस हुँदैन । फोजि सेवा सञ्चालनको समयमा कल गरेको खण्डमा थ्रीजि सेवामा परिवर्तन हुन्छ । दाता चलाउनकै लागि १०० प्रतिशत टावर भएको हुँदा १५ एम्बियसको गतिमा दाता चल्छ । त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई इन्टरनेट चलाउनका लागि धेरै फाइदा छ ।
५. सेवा उपभोगका लागि उपभोक्ताले के गर्नु पर्दछ ?
सीममा मात्र फोजि भएर भएन मोबाइ सेटमा पनि नेटको सेवा भएको हुनु पर्दछ । उपभोक्तासँग भएको समी कार्ड सुरुवामा फोजि हुनु पर्छ । सीम कार्ड फोजि छ वा छैन भनेर चेक गर्न स्टार ४४४ ह्यास कलपछि फोजि छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । सीम कार्ड फोजिको सुविधान छ भने स्टार १४१५ ह्यास कल गरी म्यासेजको निर्देशन अनुसार ५ टाइप गरी कल गर्ने म्यासेजको निर्देशन अनुसार दाता प्याक लिएर उपभोक्ताहरुले सेवा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ । यदि सीम कार्डमा फोजि सेवा सुविधा नभएको अवस्थामा नजिकको टेलिकम कार्यालयमा उपभोक्ता सम्पर्कमा आए कार्यालयबाट निःशुल्क सीम परिवर्तनको पनि व्यवस्था छ ।
६. कार्यालयमा उपभोक्ताहरुको चापको अवस्था कस्तो छ ?
विशेष गरी फोजि सेवा सञ्चालनको सूचना प्रसारण पश्चात् दैनिक विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिका परिवारहरुले सेवा सञ्चालनका लागि यस कार्यालयमा आएको अवस्था छ । साथै वाइफाइको पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरु पनि सेवा सञ्चालनका लागि दैनिक आइरहेको अवस्था छ । दैनिक आफ्नो मोबाइलमा फोजि सेवाका लागि दैनिक १० जना यस कार्यालयमा उपभोक्ता आएको अवस्था छ । उपभोक्ता कार्यालयमा आएपछि हामीले निःशुलक सीम कार्ड जाँच गरी फोजि सेवा सञ्चालन गरी दिन्छौं । सीम फोजि छ । तर, सेवा सञ्चालन भएन भने रु ५० शुल्कमा सीम परिवर्तनको व्यवस्था छ । पुरानो सीममा फोजि सुविधाका लागि नजिकको टेलिकम कार्यालयमा सुविधा छ । अन्य ठाउँमा यसको लागि सुविधाको व्यवस्था छैन । त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो सीम फोजि सुविधा नभएको अवस्थामा नजिकको टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्कका लागि म अनुरोध गर्दछु ।
७. फोजि सेवा सम्बन्धि आम उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छ ?
फोजि सेवा सञ्चाल भएपछि पत्र पत्रिका र स्थानीयत सामुदायिक रेडियोहरुमा सूचना प्रसार भई रहेको अवस्था छ । धेरै उभोक्ताहरुले सेवा सम्बन्धि सूचना पाउनुभएको भन्ने विश्वास छ । सूचना थाहा पाउनुभएका व्यक्तिहरुले सूचना थाहा पाएका उपभोक्ताहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु ।
७. यस जिल्लाबासीहरु सञ्चारको पहुँच पुगेको छ ?
यस जिल्लाबासीहरु सञ्चारको पहुँचको दृष्टिकोणले ८० प्रतिशत मात्र यसको पहुँचमा पुगको छन् । भने बाँकी २० जिल्लाबासीहरु सञ्चारको पहुँचमा अझै पुग्न नसकेको अवस्था हो । यस जिल्लाको भौगोलिक वनावट, विद्युत अभावको कारण सञ्चार पहुँचमा पु¥याउन समस्या छन् । तर, कार्यालयले यस जिल्लाबासीहरुलाई सञ्चारको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य सहित अगाडि बढेको छ ।
८. योजनाको छनोटको प्रक्रिया बताइदिनुहोस् ?
केन्द्रीय कार्यालयले वार्षिक रुपमा योजनाहरु छनोट गर्दछ । योजना छनोट गर्दा गुगल म्यापबाट सर्वेक्षण गरी योजना छनोट गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यालयले देशभरिका जनतालाई सञ्चारको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य सहित अगाडि बढेको छ । त्यसैले जिल्ला स्थित टेलिकम कार्यालयहरुबाट योजना छनोट गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छैन । तर, जिल्लासीहरुले टावरको माग गरेको खण्डमा जिल्ला स्थित टेलिकम कार्यालयहरुले तुल्सिपुर कार्यालयमा पठाउँछन् भने उक्त कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ । आवश्यकताको आधारमा केद्रीय कार्यालयले योजना छनौट गर्दै आएको छ । स्थानीयतहका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले आ–आफ्नो ठाउँको समस्याहरु सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउँदै आएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधि सहित अन्य सरोकारवाला निकायहरु पनि जनतालाई सञ्चारको पहुँच पु¥याउने प्रयास भएका छन् । आफैमा सकरात्मक कार्य हो ।
९. यस जिल्लामा नयाँ सीमको विक्रिदर कस्तो छ ?
यस जिल्लामा पनि नयाँ सीम कार्ड विक्रि कार्य सुरुवात भएको पनि वर्षाैं बिति सकेयो । त्यसैले यस जिल्लाको जनघनत्वको दृष्टिकोणले विगतको तुलनामा हाल नयाँ सीम कार्डको विक्रिदर न्यून हुन पनि स्वभाविककै हो । तर, दैनिक रुपमा १० उपभोक्ताहरुले नयाँ समी कार्ड यस कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । भने बजारमा पनि सीम कार्ड उपलब्ध भएको हुँदा धेरै उपभोक्ताहरुले पायक पर्ने ठाउँबाट नै सीम कार्ड खरिद गरेको अवस्था छ । दैनिक फोजि सेवाका लागि १० जना र सीम कार्ड हराएको नयाँ सीम कार्डका लागि दैनिक १५÷२० जना उपभोक्ताहरु कार्यालयमा सम्पर्कका आउँछन् ।
१०. कार्यालय र बजारमा पाइने सीम कार्डको मूल्य फरक हो ?
टेलिकम कार्यालय र बजारबाट बिक्रि गर्ने सीम कार्डको मूल्य एउटै हो । बजारमा विक्रि गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि सीम कार्ड बिक्रि गरेबाफट बनोशको व्यवस्था छ । सरकारले जनतालाई सहजै सीम कार्ड उपलब्ध बनाउने नीति अनुसार मध्यपश्चिमा अञ्चलमा पनि ५ ओटो डिलरहरु मार्फत नयाँ समी कार्ड विक्रि हुँदै आएको छ, जसमा नेपालगञ्जमा २, बर्दियामा १, सुर्खेत १ र तुल्सिपुरमा १ ओटा डिलरहरु छन् । क्षेत्रीय कार्यालयले डिलरहरुको माग अनुसार सीम कार्ड उपलब्ध गराउँछ । डिलरहरुले उपभोक्ताहरुलाई सीम कार्ड विक्रि गरी फम सिस्टममा अवेदत गर्नु पर्ने हो । तर, डिलरहरुले क्षेत्रीय कार्यालयबाट सीम कार्ड ल्याएर सबै सीम कार्ड सक्रिय (एकटिभ) गर्दछन् । डिलरले सिस्टममा अवेदत गरी बजार पठाउँछ । त्यसपछि उपभोक्ताले फरक व्यक्तिको नामको सीम कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ताबाट सीम कार्ड खरिद गरे वाफत फोटो र नागरिकताको फोटो कपी सहित फम त भर्छन् । तर, उक्त फम नामको मात्र हुन्छ । टेलिकममा एउटा सीमको मूल्य रु ९० बुझाउँछन् । तर, एउटा सीम कार्ड व्यापारीहरुले रु १०० मा बिक्रि गरिरहेका हुन्छन् । उपभोक्ताहरुको फोटो र नागरिकताको फोटो कपी नभएको अवस्थामा प्रति सीम कर्ड रु २ सयमा खरिद गरेको भेटिन्छ । यस्ता गलत प्रविधिहरुको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
११. उपभोक्ताले अन्य व्यक्तिको नामको सीम कार्ड प्रयोग गर्दा कस्ता समस्याहरु आउँछन् ?
उपभोक्ताहरुले अन्य व्यक्तिको नामको सीम कार्ड प्रयोग गर्दा टेलिकमलाई त कुनै समस्या आउँदैन । तर, सरकारलाई भने अपराधिक पत्ता लगाउन कठीन जस्ता समस्याहरु आइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ताहरुले आफ्नो नामको सीम कार्ड प्रयोग गर्न अनुरोध गरीरहेको छ । उपभोक्ताको सीम कार्ड हराएको अवस्थामा तत्कालन नजिकको टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गरी नयाँ सीम कार्ड निकाल्नु पर्दछ । होइन भने भेटाउने व्यक्तिले सीम कार्डको दुरपयोग गर्न सक्छ । साथै अन्य व्यक्तिको नाममाा भएको सीम कार्ड उपभोक्ताहरुलाई आवश्यक प्रमाण पत्रक साथ नजिकको कार्यालयमा सम्पर्क गरेको खण्डमा निःशुल्क स्वयम उपभोक्ताको नाममा पनि नामसरी गर्ने व्यवस्था छ ।
१२. यस जिल्लाको सञ्चार क्षेत्रको विकास निम्ति कस्ता योजनाहरु तय भएका छन् ?
यस जिल्लाम सञ्चार क्षेत्रको विकास विगतको तुलनामा तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । साथै यसमा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको ल्यान लाइन फोनलाई २ वर्षभित्र देशैभरि विस्थापित गरी फाइबरको यापmटिएच फोन भित्र्याउने कार्य योजना केन्द्रीय कार्यालय गरेको छ । त्यसको लागि तुल्सिपुर, घोराही, प्यूठानमा काम भई रहेको छ । त्यसपछि यस जिल्लाको काम हुँदै छ । प्रक्रियागत रुपमा कार्य सम्पादनमा केही समय लाग्न सक्छ, जसमा प्राइमरी दाता र सेकेण्डरी भ्वाइस हुन्छ । अहिलेको ल्यान लाइन फोनमा प्राइमरी भ्वाइस र सेकेण्डरी दाता छ । ल्यान लाइन विस्थापित कार्यक लागि जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित निकायहरुमा पहलका थप सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ, जसले १ वर्षभित्रै ल्यान लाइन फोनमुक्त हनेछौं ।
१३. अन्तिममा केही भन्नु छ, कि ?
अन्तिममा यस पत्रिका मार्फत जिल्लामा टावरको अवस्था, फोजि सहित अन्य विषयवस्तुमा मेरो विचार आम पाठक वर्गसम्म पु¥याउने अवसर दिनुभएको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।